Famerenan'ny Screamfest 2021: Ireo mpamaly faty - iHorror
Home Vaovao momba ny fialamboly Famerenana amin'ny Screamfest 2021: The Retaliators
Famerenana amin'ny Screamfest 2021: The Retaliators
Tantaran'ny valifaty mavesatra mikorontana.
by Jacob Davison Novambra 3, 2021
by Jacob Davison Novambra 3, 2021 469 hevitra
Ny tsingerina sy ny fitondran-tena amin'ny valifaty dia lohahevitra malaza amin'ny sarimihetsika mampihoron-koditra nandritra ny taona maro. From The Phantom of the Opera ny Mandy, teti-dratsy fampihorohoroana sy valifaty mihoson-drà no vato fehizoron'ilay karazana. Ary koa ny fiantraikany ara-moraly sy ara-dalàna amin'ny famaliana feno ra mandriaka toy izany. Izay mitondra antsika ho amin'ny farany amin'ny karazana sub-genre toy izany, Ireo mpamaly faty.
Ny tantara dia manaraka ny pasitera tanàna kely, Eveka (Michale Lombardi, Vonjeo aho) satria rava ny fiainany sy ny fianakaviany taorian'ny famonoana feno habibiana ny zanany lahimatoa nataon'ny mpanao heloka bevava psychopathic antsoina hoe Ram Kady (Joseph Gatt, Game ny ny seza fiandrianan'ny) izay mandositra ny tenany rehefa avy nivezivezy indroa ny fivarotana rongony. Rehefa manenjika an'i Kady ny polisy sy ny jiolahy, dia hitan'ny Bishop fa tafiditra ao anatin'ny fikambanana ambanin'ny tany izay mitady valifaty fa tsy rariny ho an'ireo niharam-boina toa azy. Hilefitra ve i Eveka sa hitarika loza ratsy kokoa ho an’ny tenany sy ny manodidina azy?
Ireo mpamaly faty manana foto-kevitra mahavariana fa noho ny toetrany somary mikorontana dia tsy ampiasaina ary tsy mifanentana amin'ny fomba tian'ny mpamokatra sarimihetsika hatolotra azy. Raha tsy mandeha mavesatra amin'ny mpandroba, dia nosamborin'ny tompon'ny mistery an'i Kady Akanin'ny tanora mihaona Fahafatesana ny fikambanana sy ny Eveka dia apetraka amin'ny toerana hampijaliana azy miaraka amin'ireo olon-dratsy sy olon-dratsy maro hafa izay voahidy. Niafara tamin'ny fangorahana azy ireo ny Eveka ary nanafaka azy ireo… nitarika azy hiady sy hamono ireo mpamono olona. Sarotra fotsiny ny manandrana sy mahatakatra ny tantara ara-moraly amin'ny fiheverana ny fandehan'ny zavatra.
Izany dia noho izany Ireo mpamaly faty mampahatsiahy ahy ny horohoron-tany mahatsikaiky taloha toy ny Inona no hataon'ny soavaly, raha mandreraka anao ny mpandeha an-tongotra? ary Ra mahery fa samy niezaka nampiseho tantara ara-moraly sy ara-pinoana indraindray fa ny hafatra dia mikorontana noho ny hadalana sy ny rà mandriaka amin'ny sarimihetsika mihitsy. In Ireo mpamaly faty manana mpitaingina mpamono olona manindrona ny mpifanandrina aminy izahay mba hahazoana vaovao eo amin'ireo mpivaro-tena midoroka zava-mahadomelina raha toa kosa i Bishop dia manana tantaram-pianakaviana mifanitsy amin'ny tantaram-pianakaviany izay mahatsiaro ho ao an-trano kokoa amin'ny sarimihetsika Hallmark. Mpamono olona maromaro nolalaovin'i Jacob Shaddix an'i Papa Roach navoaka ny fonja tamin'ny fotoana iray na dia namono takalon'aina teo anoloan'ny polisy aza noho ny politikan'ny fonja milamina nataon'ny governora. Ary ny famandrihana ny hoe tokony hijoro ho an'ny tenany ny Eveka na tsia hanohitra ny olona tsy mahalala fomba eo amin'ny hazo krismasy ary avy eo amin'ny tranom-bary. Izany akory tsy midika fa tsy mbola mampiala voly, mazava ho azy.
Ny intro dia manomboka matanjaka miaraka amin'ny tovovavy roa ao anaty fiara simba izay notafihan'ny horde, na dia izany aza no tena fanombohana haingana amin'ny tantara na dia tsy misy ifandraisany aza ny ankamaroany. Nifandona tamin'ilay fiara ny Eveka ary nanazava tsara fa 'tsy zombies izy ireo.' Sarimihetsika ambony indrindra izy io, saingy azo ankasitrahana raha tsy raisina ho matotra loatra. Ary koa, raha mpankafy metaly mavesatra ianao, ny sarimihetsika dia manasongadina ny tian'ny Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills, The Hu, sy ny maro hafa ao amin'ny tantara ary miaraka amin'ny feon-kira mavesatra mitovy.
Noho izany, raha afaka mandalo ny sasany amin'ireo hadalana sy kilema ianao, Ireo mpamaly faty manao fiambenana mahatsiravina sy mampiala voly.
2 sy sasany amin'ny 5 Maso